Vokatry ny disadisa teo amin’ny mpianaka: maty notifirin’ny rainy ny zanany vavy | NewsMada
Par Taratra sur 30/11/2020
Ny tendrom-po tsy mba namana… Noho ny disadisa teo amin’izy mianaka, nandray basy ka nitifitra ny zanany vavy ny lehilahy iray, tany ambanivohitr’i Sambava. Maty vokatr’izany ilay tovovavy. Nosamborina kosa ilay nahavanon-doza.
Tranga iray mampalahelo sy noheverina ho tsy hisy, kanefa niseho… Taitra ny mponina ao Sarahandrano, kaominina Ambohimitsinjo, distrikan’ny Sambava, ny asabotsy alina teo tokony ho tamin’ny 08 ora. Naheno poa-basy izy ireo, avy amina tokantrano iray tao an-tanàna. Fantatra fa raim-pianakaviana iray no nanapoaka ny basy tao an-tokantranony. Ny tena loza, ny zanany vavy ihany no notifiriny tamin’izany ka maty tsy tra-drano.
Araka ny angom-baovao avy any an-toerana, nifamaly tamin’ny rainy ilay namoy ny ainy ka niafara tamin’izao tranga izao. « Tsy fifankahazoana nisy teo amin’izy mianaka, lafiny ara-pitondrantena no nampisen-doatra an-drainy ka niafara tamin’izao faty olona izao », hoy ny fanazavan’ny zandarimariam-pirenena, izay nandray an-tanana ny raharaha. Tsy nisy sahy niditra an-tsehatra rahateo ny mponina noho ny basy mbola teny an-tanan’ilay raim-pianakaviana, izay lehiben’ny fampianarana teo aloha . Ny zandary kosa no nisambotra ilay raim-pianakaviana nahavanon-doza ka nogiazana nanaraka izay koa ilay basy teny aminy.
Misy lalàna mamaritra azy ny fihazonana sy ny fampiasana basy. “Natao hihazàna biby tsy voaaro na koa hiarovan-tena sy ny fananana amin’ny fahavalo izany. Tsy hamonoana olona vokatry ny tsy fifehezan-tena”, hoy ny zandarimariam-pirenena. Tsy ny olon-drehetra ihany koa no mahazo fahazoan-dalana hitana basy, satria mbola misy ilay antsoina hoe “enquête de moralité” mialoha ny hanomezana izany. Fanadihadiana mahakasika ny fitondran-tena sy ny tena filàn’ny olom-pirenena sivily mangataka hihazona basy io. Tsy natao ho an’ny olona mora tezitra sy tsy mahafehy ny hatezerana, araka izany.